Ads Manager အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု - ၁ မက်ထရစ်တွင်သင်၏မက်ထရစ်အားလုံး အခမဲ့ download
Clever Ads Mobile App သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ကြော်ငြာမန်နေဂျာဖြစ်သည်။ Google Ads ၊ Facebook ကြော်ငြာများ၊ Instagram ကြော်ငြာများ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာများနှင့်တွစ်တာကြော်ငြာများအတွက်သင်၏အွန်လိုင်းကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်ရှုစီမံရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်360ºအစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုရယူပါ။ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ခုန်ကူးခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ သင့်ဖုန်းနှင့်အပြည့်အဝနှိုင်းယှဉ်ပါ သင်အရင်ကတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသောကြော်ငြာစီမံခန့်ခွဲမှု!
သင်၏ Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်မှုများကိုကြည့်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
သင်၏လူမှုရေး ads သည်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း။
သင်၏ Microsoft Ads စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ Twitter ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုကြည့်ပါ။
အဆင့်မြင့် Ads မန်နေဂျာအားအစီရင်ခံခြင်း
သင်၏ထိပ်တန်းနည်းပညာဖြင့်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုကြည့်ပါ။ အပြည့်အဝ optimization ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြံဥာဏ်များဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားလုံးကိုထုတ်ယူပါ။ Ads စီမံခန့်ခွဲမှု!
user-ဖော်ရွေ interface ကို
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဟုပြော
"ads လှုပ်ရှားမှုများ၏လျင်မြန်စွာနှိုင်းယှဉ်။ ကျွန်ုပ်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားဖူးသမျှ ads မန်နေဂျာဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။"
Google Ads angelဝံဂေလိဆရာ
"ဒီ app ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်နှိုင်းယှဉ်စူပါအကျိုးရှိစွာ လုပ်. လျော့နည်းနေတဲ့လုပ်ရတဲ့၏ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ငါသွားလာရင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ စစျဆေးဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်သို့အဘယ်သူမျှမကပိုသစ်ထုတ်လုပ်ရေး!"
Greg Anderson က
Google Ads ကျွမ်းကျင်သူ
"အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်! Google Ads Facebook နှင့် Google Ads ထည့်ခဲ့သည် Google Ads အကောင့်တွေဖွင့်တယ်၊ အခုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေကဘာတွေပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုငါသိပြီ။ မက်ထရစ်ကြောက်မက်ဘွယ်များမှာ!"
Clever Ads မန်နေဂျာအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်
သင်၏ Google Ads ၊ Facebook ကြော်ငြာများ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာများ၊ Instagram ကြော်ငြာများနှင့်တွစ်တာကြော်ငြာများကိုစီမံခြင်း၊
သင် & သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘာကမ်းလှမ်းချက်
သင်၏ဒေတာများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်ကြော်ငြာပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ခုန်ရန်လိုသလား? သင်၏ Google Ads ၊ Facebook ကြော်ငြာများ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာများ၊ Instagram ကြော်ငြာများနှင့်တွစ်တာကြော်ငြာစည်းရုံးမှုများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စီမံပါ။ ပိုမိုလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ကြော်ငြာဗျူဟာများကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏မက်ထရစ်အားလုံးသို့မဟုတ်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးကိရိယာတွင် tab တစ်ခုတည်းဖြင့်သင်၏ရလဒ်များကိုပိုကောင်းအောင်တိုင်းတာနိုင်သည်။
Clever Ads Google Ads ၊ Facebook ကြော်ငြာများ၊ Instagram ကြော်ငြာများ၊ တွစ်တာကြော်ငြာများနှင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ (ဟုတ်မှန်ပါသည်၊ ထိုအတိုင်းလုံးဝဖတ်ပြီးသော) ကြော်ငြာအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ Clever Ads Manager နှင့်သွားလျှင်သင်၏အွန်လိုင်းကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများထဲကအကောင်းဆုံးကိုဖန်တီး၊ ပိုကောင်းအောင်နှင့်“ ညှစ်ခြင်း” ကိုပြုလုပ်ပါ။ ၃၆၀ ဒီဂရီစစ်ဆေးမှုကိုရယူပြီးသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသည်သင်၏ကြော်ငြာများသည်အပြန်အလှန်နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုပြသပါ။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်အားလုံးကို dashboard တစ်ခုတည်းမှာပဲသင်လိုချင်သည့်မည်သည့်နေရာမဆိုသင်။ ဒီဟာပိုကောင်းလာနိုင်မလား။
သငျသညျအရလိမ့်မယ် Key ကို features တွေ
Check your main metrics (spend, revenue, conversions and CPA, among others) on all advertising platforms where you are present: Google, Facebook, Microsoft, Instagram and Twitter, and be able to compare them easily. Have all your ad data and KPIs organized in fully customizable charts and graphs ဖွဲ့စည်းထားပါ။ သင်မြင်ချင်သောအရာအားလုံး၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုတစ်နေရာမှမလိုဘဲတစ်ချက်ကြည့်ပါ။
Google Ads အကောင့်ဖန်တီးခြင်း - ဘာလဲ။ သင့်မှာ Google Ads အကောင့်မရှိသေးဘူးလား။ ပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ အဲဒါကိုသင့်အတွက်ကလစ်နှစ်ချက်နဲ့ဖန်တီးပေးမှာပါ (ဟုတ်ကဲ့၊ အခမဲ့လည်း) ။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့ Googlefor အပေါ်ကြော်ငြာစတင်ရန်အတွက် Google Ads promo code ကိုသက်ဝင်စေမှာပါ။ ဒေါ်လာ ၁၂၀ အထိ Google Ads အခမဲ့ကူပွန်!
Google Ads Campaign Builder - ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Google Ads ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးချက်နဲ့ပြသဖို့ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာကိုလွယ်ကူစွာအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ဂရုပြုပါသည်။
Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်ဘတ်ဂျက် Simulator - သင်ကြော်ငြာကိုစတင်ချင်လားမသေချာဘူးလား။ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာမှတစ်ဆင့်သင်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ်ဆိုတာရှာဖွေပါ။
သင်၏ကြော်ငြာများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်သင်၏ Google Ads ၊ Facebook ကြော်ငြာများ၊ Instagram ကြော်ငြာများနှင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်များကို customized tips and tricks စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကြော်ငြာမန်နေဂျာ၊ အခမဲ့နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည်။
Clever Ads မန်နေဂျာမှအများဆုံးအသုံးပြုမှုကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Google Ads မန်နေဂျာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကြော်ငြာမိတ်ဖက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ကြော်ငြာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုသင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်ကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများစွာကိုချိတ်ဆက်ပါ။ သင်၏ Google Ads ၊ Facebook ကြော်ငြာများ၊ Instagram ကြော်ငြာများ၊ တွစ်တာကြော်ငြာများ၊ ။ အခမဲ့သတိရပါ။
balance your budget and spend based on your campaign performance သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမတူညီသောကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများအကြားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ Google Ads သည် Facebook ကြော်ငြာများထက်ပိုမိုပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နေပါသလား။ Instagram ကြော်ငြာများသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာများထက် CPA ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုသတင်းပို့ပါသလား။ မည်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်၎င်းတို့ကိုတွန်းအားပေးရန်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသနည်း။ သူတို့ကောင်းကောင်းမစွမ်းဆောင်နိုင်လို့ငါတစ်ခုခုရပ်ရမလား။
Google Ads အကောင့်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံအကြံဥာဏ်များနှင့်ဇယားများဖြင့်ပျောက်ဆုံးသောလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်သင်၏နည်းဗျူဟာနှင့်ရောင်းအားကိုတိုးတက်စေပါ။ ပရိသတ်များနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်အသစ်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်မစဉ်းစားမိသောသူတို့နှင့်အင်တာနက်မှတဆင့်မရောက်ရှိနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အကူအညီဖြင့်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေးချက်များကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်ကြော်ငြာများတွင်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်။ ဤသတိပေးချက်များဖြင့်သင်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေးချက်များသည်သင့်အားသတိပေးလိမ့်မည်။
Ads မန်နေဂျာ၏အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်၏ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုနောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ထားပါ။ သင်၏ကြော်ငြာဘတ်ဂျက်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာ။ စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရှိပါ။
Ads ဖန်တီးသူ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်
Google Ads အကောင့်မရှိဘူးလား။ ဘယ်ကစရမလဲမသိဘူးလား အကယ်၍ သင့်တွင်ဤကဲ့သို့သောသံသယများနှင့် / သို့မဟုတ်သင်၏ဘတ်ဂျက်သည်အကန့်အသတ်ရှိပါက ... ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာမန်နေဂျာနှင့်အခြားကိရိယာများသည်သင့်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဂူးဂဲလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်သင့်အတွက် (လုံးဝအခမဲ့) ကိုဖန်တီးရန်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီချင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်သင်၏ Google Ads စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကို Clever Ads Manager မှတစ်ဆင့်အလိုအလျောက်ဖန်တီးပြီးဂူဂဲလ်စံနှုန်းအားလုံးနှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေး၊ သင်၏အကောင့်၊ သင်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်၊ သင်၏ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သင်၏ကြော်ငြာများတွင်သင်သုံးစွဲလိုသောနေ့စဉ်ဘတ်ဂျက်စသည့်မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောအဆင့်လေးဆင့်ကိုသာသွားပါ။ သွား!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာတည်ဆောက်သူသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်ရွေးချယ်သောဘတ်ဂျက်သည်သင်၏ဂူဂဲလ်တွင် ads Google Ads အသစ်များနှင့်အသစ်ဖြစ်လျှင်သင့်အကောင့်တွင်မြှင့်တင်ရေးကုဒ်တစ်ခုအဖြစ် activate လုပ်နိုင်သောကန ဦး ဒေါ်လာ ၁၂၀ (သင်၏တိုင်းပြည်ငွေကြေးအပေါ် မူတည်၍) လျှော့စျေးလည်းရှိသည်။ သို့မှသာသင်သည် Google တွင်အခမဲ့ကြော်ငြာကိုစတင်နိုင်သည်။ လှည့်ကွက်များနှင့် ၁၀၀% လုံခြုံမှုမရှိပါ! ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရီးမီးယားလိဂ်ဂူဂဲလ်ပါတနာတစ် ဦး ဖြစ်သဖြင့်မည်သည့်အရာအတွက်မျှပူစရာမလိုပါ၊ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Google Ads ကျွမ်းကျင်သူများ (ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်မန်နေဂျာများ) ကသင့်အားကူညီရန်နှင့်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုကူညီရန်အသင့်ရှိပါလိမ့်မည်။
သင်၏ Google Ads စည်းရုံးရေးများကို Clever Ads Manager မှအလိုအလျောက်ဖန်တီးပါ။ သင်၏ကြော်ငြာများတွင်သင်အသုံးပြုလိုသောပရိသတ်နှင့်သင်၏ပူဇော်သက္ကာများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်နေ့စဉ်ဘတ်ဂျက်အကြောင်းသင့်အားမေးမြန်းမည့်အဆင့်သုံးဆင့်ကိုသင်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ads ဖန်တီးသူသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်ရွေးချယ်သောဘဏ္budgetာငွေသည်ဂူဂဲလ်တွင် ads ကိုပြသသောအခါသင်ရရှိသောကလစ်များအပေါ်အပြည့်အဝသုံးစွဲလိမ့်မည်။ Google Ads အသစ်များနှင့်အသစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင် Clever Ads သည်သင်၏အကောင့်တွင်အထူးပရိုဂရမ်ကုဒ်တစ်ခုကို activate လုပ်လိမ့်မည်။
Clever Ads Google Ads ၊ Facebook Ads, Instagram Ads နှင့် Microsoft Ads တို့တွင်ပျောက်ဆုံးနေသောသို့မဟုတ်မပြည့်စုံသောအရာများကိုအတိအကျပြောပြသည်။
မတူကွဲပြားသောကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်သောအကြံပြုချက်များကိုလည်းသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Clever Ads Manager သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။
အမြတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Optimize ရလဒ်များကို။
သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကို Clever Ads Mobile App ဖြင့်အခမဲ့စီမံပါ။ Android နှင့် iOS အတွက်ယခု install လုပ်ပါ။